Isifundo sevidiyo esinohlu lwezenzo ezingahlukaniswa ngesiJalimane. Kulesi sifundo, siqhubeka nesihloko sethu kuhlu lwamagama ahlukanisekayo aseJalimane. Uma ukhumbula, sinamavidiyo ama-4 ngaphezulu ngendaba yama-Verb ahlukanisekayo ngaphezu kwalena ekuwebhusayithi yethu.
Njengoba uhlu lwezenzo ezihlukaniswayo ngesiJalimane lubanzi impela, lesi sihloko sigcizelelwe kakhulu.
Abangani bakho kudingeka bafunde isiJalimane I-A1 yesiJalimane ilungiselelwe ukuhlolwa komndeni wokuhlanganiswa abangane bakho, uma udinga I-German KPSS, i-KPDS, i-UDS Abangane abakulungele ukuhlolwa okunjalo bafunde le ndaba kahle kakhulu.
Njengenye yezingqinamba eziyisisekelo, akudingekile ukuthuthela eyunithi elandelayo ngaphandle kokufundiswa ngokuphelele.
Ukufunda isiJalimane ikakhulukazi indlela enhle kakhulu yezimpikiswano ezinkulu okumelwe sifundwe noma ngekhanda, iyunithi kuzoqinisekisa ukuthi esikhathini esizayo lula kakhulu ukuthi ibonakale futhi kumelwe kufundwe esikhathini esifushane.
Uma usebenza ngesiJalimane kanjena, unga-kenbekuyini lokhu, ukuthi lokhu kudutshulwa kanjani, kungani lesi sihloko singasetshenziswanga, ukuthi yikuphi ubucwebe esasijwayele ukwenza lokhu”Futhi ngeke uphindele emuva.
Ngakho-ke, ngenkathi ufunda isiJalimane, kufanele uzame ukufunda izifundo eziyisisekelo ngendlela ehlala njalo.
Sincoma ukuthi ubuke ividiyo yethu mayelana nezenzo ezingahlukaniswa ngokucophelela.
Sifisela wena impumelelo ekuphileni kwakho kwezemfundo yaseJalimane.
Tags: 10. izenzo zesiJalimane ezihlukaniswayo, 11. izenzo zesiJalimane ezihlukaniswayo, 9. izenzo zesiJalimane ezihlukaniswayo, Izenzi ezihlukanisayo zesiJalimane, izenzi ezilondoloziwe zama-German